ယူအေအီး✰✰✰✰✰ & ဗီဇာအတွက်အိန္ဒိယလူမျိုးအဘို့အအလုပ်ရှာဖွေရေးအခွင့်အလမ်းများပေး
ယူအေအီးသို့ရွှေ့ရန်မှကို Safe ဒါဟာင်
အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း အင်ဒီးယန်းများအတွက် ယူအေအီးအတွက်တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, အိန္ဒိယကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်ကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်။ ယူအေအီးရဲ့စီးပွားရေးကိုအစာရှောင်ခြင်းဤအရပ်ပုချိုးကြီးထွားလာနေသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ။ သငျသညျအိန်ဒိယတှငျဖြစ်ကြပြီးအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေလျက်လျှင်, အာရပ်ကမ္ဘာကိုကြီးစွာသော option တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာသင်စိတ်ကူးနိုင်သည်ထက်အိန္ဒိယအတွက်အလုပ်အကိုင်အကိုရှာဖွေအများကြီးပိုလွယ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အမည်မသိ၏ကြောက်စိတ်ပြည်ပမှာလျှောက်လွှာအောင်ထံမှရှက်လူအများစုဟာ။
မကြာသေးမီကအိန္ဒိယ အစိုးရသစ်ကိုမဟာဗျူဟာများနှင့်အတူတက်ရောက်လေပြီ process ပေမယ့်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ်အတွင်း၎င်း၏နိုင်ငံသားများ၏လုံခြုံမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီရန်သာ။ ယူအေအီးအတွက်န်ထမ်းများအတွက်ချုပ်ခရီးစဉ်တစ်ခုမှာ။ ဒါဟာအားလုံးနယ်ပယ်များတွင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဘို့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုမြေယာအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်လွှားကြီးမှူးမတ်နေသည်။
ယခုနှစ်အစအဦးကတည်းကအင်ဒီးယန်းမတိုင်မီအစိုးရက run ထားတဲ့အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းမှာမှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါသည် သူတို့အလုပ်အတွက်ယူအေအီးမှထွက်သွား။ ဒါကအလုပ်အကိုင်အများ၏အခြေခံပေါ်မှာခရီးသွားလာဖြစ်ကြောင်း Non-ECR နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုင်ဆောင်သူသက်ဆိုင်သည်။ အလွန်နည်းပါးအင်ဒီးယန်းသွားရောက်လည်ပတ်သို့မဟုတ်အားလပ်ရက်များအတွက်ယူအေအီးသို့သှားအလွယ်ကူဆုံးဗီဇာအလုပ်အကိုင်အဘို့ဖြစ်၏။ အစိုးရကအမှန်တကယ်ထွက်ခွာအချိန်မတိုင်မီမှတ်ပုံတင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအနည်းဆုံး 24 နာရီဖြည့်စွက်ဖို့ယူအေအီးမှရွေ့လျားစိတ်ဝင်စားမဆိုအိန္ဒိယနိုင်ငံသားလိုအပ်သည်။ တစ်ဦးတည်းသောရည်ရွယ်ချက်များ၏သက်သာချောင်ချိရေးနှင့်အကျိုးစီးပွားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ်.
ယူအေအီးတန်းတူအခွင့်အလမ်းအလုပ်ရှင်စျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏နိုင်ငံသားစိုးရိမ်ရန်မလိုပါ။ တကယ်တော့, အာရပ်ဒေသ သင်တစ်ဦးအလုပ်အရည်အချင်းပြည့်မှီလျှင်စာရွက်စာတမ်းအိန္ဒိယတိုက်ကြီးဤအရပ်မှလွယ်ကူသောအပြောင်းအလဲနဲ့အတူအနီးကပ်ဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ဟာကမ္ဘာ့တလွှားနိုင်ငံသားတွေလိုပဲသငျသညျမရရှိနိုင်ပါအခွင့်အလမ်းများအပေါ်ကျယ်ပြန့်သုတေသနနှင့်သင့်အကျိုးစီးပွားကိုက်ညီသောသင့်လျော်သော applications များလုပ်ဖို့ရှိသည်။
ဒါဟာကြောင့်လောကီသားတို့သည်အထဲကအများစုဟာအခြားအစိတ်အပိုင်းများထက်အိန္ဒိယတွင်လွယ်ကူသည် အစိုးရပဏာမခြေလှမ်း တိုက်ကြီးအတွင်းနှင့်မရှိဘဲအလုပ်ရှာရန်ကျွမ်းကျင်သောနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောနိုင်ငံသားတွေကိုကူညီ။ အိန္ဒိယလူဦးရေကိုကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံးအကြားဖြစ်ပါသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်အတူ ကြီးမားသောလုပ်သားအင်အား၏အစိတ်အပိုင်းအောင်ဤအလွန်အနည်းငယ်တည်ငြိမ်အလုပ်အကိုင်များဤအရပ်မှစိတ်မချရဝင်ငွေရှိသည်။
သငျသညျအိမ်ထောင်စုဝင်ငွေအဆင့်ဆင့်ပတ်သတ်ပြီးနှင့်အတူအိန္ဒိယအတွက်စီးပွားရေးအခြေအနေကိုနားလည်သေချာဖြစ်၏။ ဒါဟာအစိုးရမှလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ရှက်စရာမဟုတ်, အိန္ဒိယအစိုးရရဲရငျ့စှာထှကျလာခဲ့ပါသည် ယင်း၏နိုင်ငံသားများယူအေအီးနဲ့တူချုပ်ခရီးစဉ်အတွက်ပြည်ပမှာအလုပ်ရှာကူညီရန်။ ၏သင်တန်း, ဒီဟာသူတို့ရဲ့ဇာတိနိုင်ငံ၏ဂျီဒီပီမြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာလွယ်ကူသောအင်ဒီးယန်းယူအေအီးအတွက်အလုပ်ကိုရှာဖွေစေသည်သောအမျိုးသားရေးအစိုးရကမဟာဗျူဟာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာယူအေအီးမှအိန္ဒိယကနေကျောင်းသားတစ်ဦးဗီဇာ process ရန်လွယ်ကူသည်။ ကျောင်းသားခရီးသွားနှင့်ဆက်စပ်သောအဆိုပါကုန်ကျစရိတ်လည်းအတော်လေးနိမ့်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာ သင်ယူအေအီးအတွက်နေရာတစ်နေရာအာမခံချက်။ ရည်မှန်းချက်ကတော့ဒီကိစ္စမှာတိုင်းပြည်ကိုခြေချဖို့ပဲ။ သင်ကဲ့သို့သင်သည်4နှစ်သို့မဟုတ်လအနည်းငယ်အတွက်လေ့လာသင်ယူနိုင်သည် အလုပ်ရှာပါ။ ယူအေအီး၌အလုပ်အကိုင်အမြင့်ဆုံးနှင့်အတူသင်အလုပ်တစ်ခုကိုလက်လွတ်မနိုင်; သင့်ရဲ့အရည်အချင်းပေါ်မူတည်။ ပေါ့ပေါ့သို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရှိမရှိ။
တစ်ဦးကပညာသင်ဆုကိုသင်တိုင်းပြည်အတွက်အကူအညီရရန်အစွန်အဖျားဖြစ်ပါတယ်။ ယူအေအီးအတွက်အများစုမှာအလုပ်ရှင်များသငျသညျယာယီအလုပ်လုပ်ခွင့်ကို process ကူညီပေးပါမည်။ သင်တစ်ဦးမဟုတ်တော့ကာလများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အအရစီမံခန့်ခွဲလျှင်, ပါမစ်တိုးချဲ့နှင့်အမြဲတမ်းဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မည်။ ယူအေအီးအတွက်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရဖို့ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမယ့်သင်ကလူနာနှင့်သင့်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်ဖို့ရှိသည်။ သင်ကကအတူယုံကြည်မှုကိုရရှိသင့်သည်, ယုံကြည်မှုအာရပ်ယဉ်ကျေးမှု၌အရေးကွီး၏။
အိန္ဒိယနှင့်အာရပ်ယဉ်ကျေးမှုကိုဤအရပ်မှတူညီနှစ်ဦးစလုံးယဉ်ကျေးမှုဖွဲ့စည်းရန်ကအကြားလွယ်ကူသောအပြန်အလှန်ရှိသည်။ သငျသညျအလုပျမဆိုကြင်နာရှာတွေ့မှဘာသာရေးအပေါ်အခြေခံပြီးထူထောင်ဆက်ဆံရေးအားသာချက်ယူသင့်ပါတယ်။ သင် ... သင့်တယ် ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အဘို့ရှာဖွေတဲ့အခါမှာ Open-စိတ်တူကိုယ်တူဖြစ်လိမ့်မည်။ အများစုမှာအလုပ်ရှင်များကသူတို့သတ်သတ်မှတ်မှတ်အခန်းကဏ္ဍနှင့်ကုမ္ပဏီ၏ရှယ်ယာအဓိကမဟာဗျူဟာ assign မတိုင်မီစောငျ့ရှောကျအကဲဖြတ်ရန်နှင့်ဝန်ထမ်းနှင့်အတူယုံကြည်မှုနှင့်ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရန်ရှာကြာလော့။ ဒါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးရှုထောင့်များတွင်သက်ဆိုင်ပါသည်။
သင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနှင့်အတူပွင့်လင်း Be, သင်အလွယ်တကူပြန်အိန္ဒိယအတွက်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးသို့မဟုတ်ဆွေမျိုးများထံမှတစ်ဦးလွှဲပြောင်းရယူနိုငျပါသညျ။ အလုပ်အကိုင်ဗီဇာအပေါ်ယူအေအီးမှ Moving ပထမဦးဆုံးအခက်ခဲသည်မဟုတ်,, သင်တစ်ဦးသင့်လျော်သောအလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့အပေါ်အလုပ်လုပ်ဖို့ရန်ရှိသည်။ အာရပ်ကမ္ဘာအတွက်လူနေမှုအဆင့်အတန်းသင်၌နထေိုငျဖို့ရွေးချယ်မည်မြို့ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, သငျသညျအလုပျရှာတွေ့ပေါ်တွင်ပထမဆုံးအာရုံစူးစိုက်ထားရမည်, ထိုကြွင်းသောအရာနောက်ကိုလိုက်လိမ့်မယ်။
ယူအေအီးတစ်ဦးချုပ်အလုပ်ရှင်၏, မည်သူမဆိုလို ပင်သာတနင်္ဂနွေများအတွက်ဒူဘိုင်းသွားဖို့အခွင့်အလမ်းကိုယူ။ အာရပ်ဒေသသည်စီးပွားရေးနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပိုမိုများပြားလာသောကြောင့်အလျင်အမြန်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်သည်။ သင့်တွင်ကျွမ်းကျင်မှုရှိပါကကြီးမားသောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုသင်ရရှိနိုင်သည် ဒူဘိုင်း။ ဒူဘိုင်းတွင်လုပ်ခလစာသည်အထင်ကြီးစရာကောင်းသည်။ ထို့အပြင်အိုးအိမ်နှင့်အိမ်အသုံးအဆောင်ဥပဒေကြမ်းများသည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိအခြားနိုင်ငံများထက်မမြင့်မားပါ။ ရေနံပေါများခြင်းနှင့်ပေါင်းစပ် အာရပ်ယဉ်ကျေးမှုကိုကအင်ဒီးယန်းအဘို့ဖြစ်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာက နှစ်ခုယဉ်ကျေးမှုများအကြားနားလည်မှုလို့ပဲ။
ငါအလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့နိုင်သလော - ယူအေအီးအတွက်အိန္ဒိယလူမျိုးအဘို့အအလုပ်ရှာဖွေရေးအခွင့်အလမ်းများ?
ဒူဘိုင်းတစ်ဦးအနိမ့်ကျွမ်းကျင်အလုပ်အဖွဲ့ရှိပြီးအမြဲဒီအနေအထားဖြည့်ဖို့အရည်အချင်းတစ်ဦးချင်းစီကိုရှာဖွေနေသည်။ အဆိုပါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရေနံကြွယ်ဝသောဖြစ်ကြပြီးနေသမျှကာလပတ်လုံးစီးပွားရေးသူတို့၏မျှော်လင့်ချက်များနှုန်းအဖြစ်အပြေးနေသည်အဖြစ်န်ထမ်းပေးဆောင်နှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုမရှိကြပါဘူး။ တစ်ဦးအလုပ်ရှာဖွေတာတွေနဲ့တစ်ခုတည်းသောပြဿနာ ဒူဘိုင်းယဉ်ကျေးမှု၏ပေါင်းစည်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အာရပ်ကသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေအပေါ်တင်းကျပ်သောဖြစ်ကြသည်နှင့်သင်မဟုတ်ရင်ပြုမူလျှင်အလွယ်တကူမှားလိမ့်မည်ဟု; သင်သည်သူတို့၏ယုံကြည်ချက်များဝေမျှသို့မဟုတ်အတည်ပြုမပြုစေခြင်းငှါအနေဖြင့်သူတို့သင်ယုံကြည်ချက်နှင့်အညီဆောင်ရွက်ရန်မျှော်လင့်ထား။ ဒါဟာသူတို့အလုပ်ရှင်များဖြစ်ကြပါသည်, သင်ကအရမ်းအနည်းဆုံးသူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်၌ရှိကြ၏စဉ်းစားမျှတသည်။
ဒါဟာစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်နေစဉ် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာများစွာသောလူများအတွက်, အင်ဒီးယန်းပိုကောင်းကြောင့်ယဉ်ကျေးမှုရောနှော၏ချထားပါသည်။ အဲဒီဘာသာတရား၏အသီးအသီး၏ကြီးများသဘောသဘာဝအတူတူအသက်ရှင်ရန်လွယ်ကူစေသည်။ သင်ကအာရပ်တွေနဲ့အတူသွားကြဖို့အိန္ဒိယအဖြစ်ပြဿနာတစ်ခုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အိန္ဒိယအာရပ်များအတွက်အရေးကွီးသောလည်း၎င်း၏တန်ဖိုးများကိုအပေါ်တင်းကြပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကပဲအိန္ဒိယလူမျိုးနဲ့တူစည်းကမ်းတစ်ခုသဘောမျိုးရှိသည်။
ဒါဟာနှစ်ခုဒေသများအနီးကပ်ဆက်ဆံမှု၌ရှိကြ၏သောသိသာအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုရေးနှင့်ဘာသာရေးဒြပ်စင်များ၏နားလည်မှုသူတို့ကိုရှည်လျားတည်မြဲမိတ်ဆွေများကိုမှန်ကန်စေသည်။ သငျသညျကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ကို၏အခြေခံပေါ်မှာအလားတူအရည်အချင်းများနှင့်အတူတွေ့ဆုံမေးမြန်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ခဲ့ကြပါလျှင်, သငျသညျဘာလို့လဲဆိုတော့သင့်ရဲ့ origi ၏ကျန်ကျော်တစ်ဦးအားသာချက်ရှိသည်မယ်လို့ဎ။ ဒီအမျိုးမျိုးသောမျက်နှာစာပေါ်ဝေဖန်နိုင်ပါတယ်နေစဉ်, ဒူဘိုင်းအလုပ်ရှင်များကတစ် preference ကိုများနှင့်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
အဆိုပါအခွင့်အလမ်းလေးသာသင့်ရဲ့မျက်နှာသာအတွက်ဖြစ်ကြောင်း, အဆုံးမဲ့သော်လည်း, သင်သာတဦးတည်းတာဝန်ရှိသည်, သင်တို့အဘို့အညာဘက်ကိုအလုပ်ရှာဖွေတာ။ ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်တိုင်းအလုပ်သင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှု, အတွေ့အကြုံ, ဒါမှမဟုတ် preference ကိုကိုက်ညီဘူး။ ဒါ့အပြင်သင်ဒူဘိုင်းထိုသို့သောအလုပ်အကိုင်များကို advertise သောလိုင်းများကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။
သင်သည်သင်၏အရည်အချင်းများနှင့် ပတ်သက်. တိကျသောဖြစ်ကြပြီးတိကျတဲ့အလုပ်ချင်လျှင်, သင်ဒူဘိုင်းနှင့်သူတို့ငှားရမ်းလျှင်ထိပ်ကုမ္ပဏီများသုတေသနချင်ပေလိမ့်မည်။ သငျသညျရဲရင့်ဖြစ်နှင့်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုကြော်ငြာရန်အအေးမိအီးမေးလ်ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ဒါကအဆင်မပြေမှုသို့မဟုတ်ယုံကြည်စိတ်ချမှုအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်ပါသည်။ သင်အသုံးပြုဆိုလိုတယ်ဘယ်ဟာကိုသင်တိုက်ရိုက်အဆက်အသွယ်လုပ်သည့်အခါတစ်ဦးအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကိုလက်လွတ်ဖွယ်မရှိပေ။ သင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရည်မှန်းချက်ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 လာမယ့်နေစဉ်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ထားတဲ့ပိုမိုလွယ်ကူနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်.
ဒူဘိုင်းတည်ငြိမ်သောအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်နှင့်အတူထိပ်တန်းမြို့တို့တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းနှင့်ယူအေအီး၏မြေတပြင်လုံး၌အနည်းပညာအဆင့်ကိုလည်းအစာရှောင်ခြင်းကြီးထွားလာနေပါတယ်။ အများစုမှာကုမ္ပဏီများသည်စားသုံးသူ employ သို့မဟုတ်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းကို အသုံးပြု. ရသည်။ သင့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက် အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်အလုပ်ရှာဖွေရေးလွယ်ကူစွာတစ်ဦးဒူဘိုင်းအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကရန်သင့်အားဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းစနစ်နှင့်အတူစိတ်အားထက်သန်မှုကိုလည်းအလုပ်ရှင်အထင်ကြီးဖို့ကလွယ်ကူစေသည်။ အီးမေးလ်ကတဆင့်သို့မဟုတ်ကသူတို့ရဲ့ website သို့သို့မဟုတ်လူမှုရေးမီဒီယာလက်ကိုင်ပေါ်လိုင်းများမှတဆင့်ဒူဘိုင်းအတွက်အလားအလာရှိသောအလုပ်ရှင်ဆက်သွယ်သူတို့ရဲ့အလုပ်အကိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်သြဇာလွှမ်းမိုး။ အာရပ်ဤနေရာတွင်နည်းပညာအကြောင်းကိုစိတ်အားထက်သန်နေကြသည် နှင့်သင့်စွမ်းရည်ဖေါ်ပြခြင်း၎င်းတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်များဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။
အိန္ဒိယနှင့်အမျှဒီကြောင့်ဘဝ-ပြောင်းလဲနေတဲ့အခွင့်အလမ်းဖွစျလိမျ့မညျ ဒူဘိုင်း၌မြင့်စီးပွားရေးအဆင့်။ အသက်တာ၏အရည်အသွေးကိုလည်းအိန္ဒိယကိုနှိုင်းယှဉ်ပါကအတော်လေးမြင့်မားသည်, ဒါပေမယ့်ကုန်ကျစရိတ်အနိမ့်နေဆဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါအခွန်နှုန်းထားဖော်ရွေပါ၏ utility ကိုဥပဒေကြမ်းများစံပါ၏ အီလက်ထရွန်းနစ်နှင့်ပျော်စရာကုန်ကျစရိတ်လည်းစညျးမဉျြးစညျးကမျးဖြစ်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းအတွက်လုပ်အားခနှုန်းမှာကိုလည်းကမ္ဘာ့နေရာအတော်များများမှာနှိုင်းယှဉ်ပါကအဆင်သင့်ပါပဲ။
ကိုသတိရပါ, သငျသညျအိန်ဒိယနိုငျငံ၌ရှိကြ၏လျှင်သင်တို့သည်ကြီးစွာသောအခွင့်အလမ်းရှိသည်။ အိန္ဒိယအစိုးရကိုလည်းအစာရှောင်ထောက်ပံ့နေသည် ဒူဘိုင်းမှအလုပ်အကိုင်ဗီဇာရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့.
အိန္ဒိယများအတွက်ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ်s ယူအေအီးအတွက် - "အလွန်သိကောင်းစရာများလမ်းညွှန်"။ အခုဆိုရင်အိန္ဒိယကနေအလုပ်ရှာဖွေသူများယခုကြှနျုပျတို့ကုမ်ပဏီမှကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း upload တင်လို့ရပါတယ်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီကိုခေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ် site ကိုပေါ်တယ် ယခုယူအေအီးအတွက်ငှားရမ်း။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းပင်လယ်ကွေ့ဒေသတွင်း၌အလုပ်အကိုင်ကိုရှာဖွေအိန္ဒိယပြည်တော်ပြန်ကူညီပေးနေသည်။ အိန္ဒိယကနေအသစ်တခုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူအဖြစ်။ သင်ကယူအေအီးအတွက်အိပ်မက်အလုပ်ရှာတွေ့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်ဒူဘိုင်း, အဘူဒါဘီနဲ့ Sharjah မြို့ကြီးများ၌တည်၏။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုအဖွဲ့သည်အိန္ဒိယလူမျိုးအဘို့အဒူဘိုင်းအချို့စိတ်ဝင်စားဖို့အလုပ်အကိုင်များရှိသည်ဖို့စီမံခန့်ခွဲ။ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ HR န်ဆောင်မှုအဓိကအားဖြင့်အိန္ဒိယအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူထံအပ်နှံကြသည်။ ပြည်ပရှိဖြစ်လာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူယခုအလွန်လွယ်ကူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများသည်ပညာရှင်အသစ်များအတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ သင်လုပ်နိုင်သည် တင်ပါကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းကိုတင်ပါ အောက်နှင့် ယူအေအီးအတွက်အိပ်မက်အလုပ်အကိုင်ရှာတွေ့။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်အင်ဒီးယန်းဒူဘိုင်းစီးတီးအတွက်အကြီးမားဆုံးအခွင့်အလမ်းတွေကိုရှိခြင်းနေကြသည်။
ငါသည်သင်တို့၏ကုမ္ပဏီနှင့်အတူလျှောက်ထားသောအခါငါရှိသည်မယ်လို့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အပူဇော်သောအာမခံချက်စေကြလိမ့်မည်နည်း။ သင်၏လျှောက်လွှာကိုသင်ပေးပို့သရွေ့ကျွန်ုပ်တို့၏အဖြေမှာဟုတ်ကဲ့။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး သည်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင့်ထံပြန်လာပါလိမ့်မည်။ ဖြစ်ရပ်အချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ Skype မှသို့မဟုတ်သင်နှင့်စကားပြောရန်လိုအပ်သည် WhatsApp ကို။ လျှောက်လွှာတင်ပြီးနောက်ဒူဘိုင်းတွင်အိန္ဒိယလူတစ် ဦး အနေဖြင့်အလုပ်တစ်ခုရမည်ဟုမျှော်လင့်နိုင်သည်။
ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့ကုမ္ပဏီကအိန္ဒိယအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသူများကို Emirates တွင်အလုပ်ရှာရန်ကူညီသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ HR မန်နေဂျာတစ် ဦး သည်အမြဲတမ်းအလုပ်ရရန်ကူညီနေသည် အိန္ဒိယအတွက်ဒူဘိုင်း 12th သည်ဖြတ်သန်းသွားသည် အိန္ဒိယများအတွက်ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များ 10th pass လုပ်သားများ။ ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရရင်၊ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူကြီးမားတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိ ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေမတွေ့ရှိပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအိန္ဒိယကနေအလုပျသမားအဘူဒါဘီသို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းအတွက်ပြည်ပရှိလုပ်အားတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ကူညီရန်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါသာအနုတ်လက္ခဏာဘက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းအမြဲလျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တစ်ခက်သဘောတူညီချက်နှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ဘက်မှာအမှုကိုပြုရပါမည်ဖြစ်ပါတယ်, သင်အလုပ်အကိုင်အဘို့သင့် application ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဖြစ်လာကြောင်း 100% သေချာမှုရှိရမည် ဒူဘိုင်းအတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖို့ခိုင်မာတဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှလုပ်ခအပေါ် asap နှင့်သင်တန်း၏သငျသညျထားပါရန်သင့် application ကိုနည်းနည်းတွန်းဖို့ကြိုးစားပါ။
entry level ကို ( လောလောလတ်လတ်ဘွဲ့ရကျောင်းသားများ $ 3,000 တစ်လအထိ $ 4,5000 ထက်) လျော့နည်းမဟုတ်။
အလယျပိုငျးစီမံခန့်ခွဲမှု (3 နှစ်ပေါင်းအတွေ့အကြုံကိုမှတက် 10) တစ်လ $ 5,000 ထက်လျော့နည်းမ $ 8,000 အထိအချို့ကိစ္စ - အပိုဆုမပါဘဲ $ 11,000 တစ်လ။
အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှု 8 ကျော်ရှိရမည် ဒူဘိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနှစ်, အင်ဂျင်နီယာသို့မဟုတ်အဖွဲ့ကစီမံခန့်ခွဲမှုသတ်သတ်မှတ်မှတ်အတွေ့အကြုံကို။ ဤအချက်မှာလုပ်ခ $ 10,000 တစ်လအထိ $ 25,000 ထက်အများကြီးပိုပါတယ်။
ပညာတတ်မန်နေဂျာ, ဒါရိုက်တာများ, CFO, CEO ဖြစ်သူပိုပြီးမြျှောလငျ့နိုငျ $ 25,000 တစ်လထက်။ သို့သော်ဤအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှုအတွက်သီးသန့်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကြားပေးပါ။
သို့သော်သင်သည်ထိုထက် ပို. ရှာဖွေနေနှင့်လုပ်ခသင်တို့အဘို့လျော့နည်းဖို့လမ်းဖြစ်ကြောင်းလျှင်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်သင်၏လျှောက်လွှာကိုလုပ် ကျေးဇူးပြု. ဒူဘိုင်းခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့။ ထိုအခါငါတို့ HR မန်နေဂျာသင့်ဖိုင်များသို့ကြည့်ရှုနှင့်သင်လုပ်ခလစာနှင့်အတူဘားမြင့်တက်ကူညီပေးပါမည်။
မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီနှင့်အဓိကအချက်တစ်ချက်မှာမြန်ဆန်လွယ်ကူသောနေရာပြောင်းရွှေ့ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရရင်၊ ငါတို့ကုမ္ပဏီနဲ့မင်းအိန္ဒိယမှာထိုင်နေတုန်းမှာအလုပ်လျှောက်စာရှိတယ်။ အများစုမှာ အင်ဒီးယန်းများအတွက်ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များ အွန်လိုင်းစီမံခန့်ခွဲဖြစ်ကြသည်။ ဒါဆိုမင်းရဲ့အဖြေကမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီသင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်အကိုင်အရကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ HR အဖွဲ့သည်နေ့စဉ်တွေ့မြင်နိုင်သည့်အကြီးမားဆုံးအမှားတစ်ခုမှာအတွေ့အကြုံနည်းပါးခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အိန္ဒိယလူမျိုးကအလုပ်တစ်ခုရှာနေသည် ဗီဇာသွားရောက်ကြည့်ရှု ယူအေအီးအတွက်။ ပြီးတော့ ၂ ရာခိုင်နှုန်းအောက်ပဲရှိတယ် ဒီအလုပ်ရှာဖွေအောင်မြင်သောဖြစ်လာကြောင်းအခွင့်အလမ်း.
ဒါကြောင့်, ထို့နောက်ခေါ်ဆိုခစင်တာတစ်ခုအိန္ဒိယအဖြစ်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်မည်သို့? ကောင်းပြီ, စော်ဘွားအတွက်အလုပ်အကိုင်အများအတွက်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းရိုးရှင်းစွာခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုခွဲထားခဲ့သည်ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်ပထမဦးဆုံးလျှောက်လွှာ, ထို့နောက်အလုပ်ရှင်များဗီဇာထုတ်ပေးရမယ်, ပြီးတော့အမှန်ခြစ်ပျံသန်းကြိုတင်ဘွတ်ကင်နိုင်ပြီး တရားဝင်လမ်းအတွက်စော်ဘွားကူးလာမယ့်.
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီတစ်ခု CV ကို Upload လုပ်ပါ
ကအောက်တွင် Click 100% အာမခံပါ!
လည်းအခြားသူများကိုဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ရှာကိုကူညီ share ပေးပါ
ဒူဘိုင်းရှိအလုပ်များ - အရှေ့အလယ်ပိုင်းနေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်း Expats အတွက်လမ်းညွှန်
ယူအေအီးအတွက်အိန္ဒိယလူမျိုးအဘို့အအလုပ်ရှာဖွေရေးအခွင့်အလမ်းများတကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခြင်းဟာကြီးမားတဲ့ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းမြို့နေဆဲအိန္ဒိယကျွမ်းကျင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအဘို့အလုပ်ရှာဖွေရေး၏စည်းကမ်းချက်များ၌ အိန္ဒိယကနေဒူဘိုင်းမှ အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သင်တို့မူကား, ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလုပ်သည့်အခါတစ်ချိန်တည်းမှာ။ တိုင်းအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုပင်သင်တို့ကိုရှေ့တော်၌အလွန်ဂရုတစိုက် check လုပ်ထားရပါမည် သင်၏ CV ပို့ပေးပါ.
အလုပ်၏သတိထားထည့်သွင်းစဉ်းစားယူအေအီးအစိုးရတွင်ကျယ်စွာ adverts ပြီးနောက်, လိမ်လည်မှုအကြံပေးက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာစစ်ဆေးပါ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျအစကအတုကြော်ငြာမဟုတ်ပါဘူးဒီအခွင့်အလမ်းတစ်ခုတည်နေရာများအတွက်အခြေခံလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ထို့အပွငျ, သင်လက်ပေါ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကမ်းလှမ်းမှုကို get နိုင်ပါတယ်။ အိန္ဒိယကနေတိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များများအတွက်ထားရှိနိုင်ပါသည်။ သငျသညျဆိုပါက, သင်သည်ကြားရပြီအဘယျသို့အဘယ်သူမျှမကိစ္စ သင့်ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဘို့ပြု။ သငျသညျကျိန်းသေအနေနဲ့အလုပ်အကိုင်အစာတစ်စောင်ရတဲ့သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းကိုတိုးမြှင့်စေမည်။
သင်ယူအေအီးအတွက်အိန္ဒိယလူမျိုးအဘို့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများအကြောင်းကိုသိကြရမယ်နောက်ထပ် key ကိုအမှတ်။ ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများရှိနှစ်ပေါင်းအောက်ပါကျိန်းသေဘုတ်အဖွဲ့အားအသစ်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖြစ်စေသောလား? ဥပမာ, ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း နှင့် ကာတာနိုင်ငံအတွက်ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလား ထို့အပြင် GCC တစ်ကြီးထွားလာအခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့နီးပါးတိုင်းကျွမ်းကျင်သူများကိုယ်ပိုင်အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည် ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများအတွက်အလုပ်အကိုင်အကိုရှာဖွေရန်.
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအဘို့ပူဇော်သက္ကာဘို့သောကောင်းသောအချက်များကိုတစ်ခုမှာတစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်းတုံ့ပြန်မှုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းမှုအဖွဲ့ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ပါတ်အချိန်အတွင်းအလုပ်အကိုင်အခွင့်အကမ်းလှမ်းမှုရှိခြင်း, စကားပြော။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကိုစီမံခန့်ခွဲခဲ့ကြအရှည်ဆုံးအချိန်6လအတွင်းအချိန်န်းကျင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအားလုံး အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းရဲ့အတွေ့အကြုံအပေါ်မူတည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းကအမြဲအားလုံးရှုထောင့်နှင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖောက်သည်တောင်းဆိုမှုကိုအဖြစ်ပေးအပ်ပါလိမ့်မည်သေချာဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
ကျနော်တို့လူတွေကိုကူညီပေးနေကြပါသည် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာပါ။ တကယ်တော့ငါတို့ကူညီနေတယ် ဗီဇာနှင့်အတူ နှင့် အလုပ်တစ်ခုဆိုတော့ဒူဘိုင်းအတွင်းပိုင်းကမ်းလှမ်း အကြံပေးချက်များ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီစော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမှအလုပ်ရှာဖွေန်ဆောင်မှုလွှဲပြောင်းပေးပါသည်။ ဒါကြောင့်အိန္ဒိယကနေကိုယ်စားလှယ်လောင်းကျိန်းသေဒူဘိုင်းကိုသွားနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့နက်ရှိုင်းဒူဘိုင်း, ယူအေအီးအလုပ်ဈေးကွက်အသိပညာနှင့်အတူအရေးပါသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသုတေသန analogize ရန်ဒီနေရာကိုဖြစ်ကြသည်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေရာဖို့ကြိုးစားနေကြောင်းပေါ် base ။
အဲဒီသတင်းအချက်အလက်ကိုသငျသညျကိုထောကျပံ့ပါလိမ့်မယ် ယူအေအီးအတွင်းအလားအလာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလှုပ်ရှားမှုများအတွက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတစ်ခုကသာအိန္ဒိယလူမျိုးအဘို့အဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များတစ်ခုအံ့သြဖွယ်ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိသောန်ဆောင်မှုပေါ် အခြေခံ. အလွန်ရေပန်းစားဖြစ်လာသည်။
စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ WhatsApp ကိုမိုဘိုင်းဖုန်းစုဆောင်းမှုစနစ်က အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာအရပျကကူညီပေးခဲ့ အထူးသဖြင့်အိန္ဒိယကနေအလုပ်ရှာဖွေသူ။ ဒါကြောင့်အိန္ဒိယဒူဘိုင်းဒေသတွင်း၌အမှုဆောင်အရာရှိအလုပ်အခြားသောလမ်းထားရန်။ သူတို့ကိုအခွန်လွတ်လစာအလုပ်အကိုင်များသို့နက်ရှိုင်းစွာထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးတော်မူ၏။ ဒူဘိုင်းအတွက်စိတ်ထဲအလုပ်အကိုင်များ၌ဤအတူသင်တို့အရှေ့အလယ်ပိုင်းရပျကှကျတှငျနထေိုသို့ကူး turn ပေးပါ။
အိန္ဒိယအလုပ်အကိုင်ကိုရှာဖွေနိုင်သည့်နေရာများအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေနဲ့ဘလော့ဂ်ရေးသားခြင်း။ ထိုအခါစမတ်လမ်းကအခြားကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အတူချိတ်ဆက်ရန်အလုပ် site ကိုသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောအလုပ်အကိုင်များအုပ်စုများနှင့်အခြားသူများကိုဖိတ်ခေါ်သကဲ့သို့အပြန်အလှန်ဒူဘိုင်းမြေပုံကိုယ်ပိုင်ပရိုဖိုင်းကိုဖြည့်စွက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေအဖြစ်အိန္ဒိယကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်အနည်းငယ်ကောင်းသောနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျကိုလည်းအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကုမ္ပဏီများငှားရမ်းကိုကြည့်သင့်ပါတယ်။ ယူအေအီးမှာအကောင်းဆုံးတစ်ခုမှာတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် တစ်ဦး Careerjet ဟုခေါ်တွင်အလုပ်ခန့် နှင့် ကောင်းစွာတစ် Monster ပင်လယ်ကွေ့အဖြစ်အိန္ဒိယတွင်လူသိများသူကုမ္ပဏီ။ သူတို့ကသင်၏ CV နှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ကယ့်ကိုထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။ 100,000 ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနေ့စဉ်နေ့တိုင်းရှိမှတ်ပုံတင်ကြသည်ထက် ပို. , သငျသညျလညျးထိုခဲနောက်ကိုလိုက်သင့်ပါတယ်။
သင်ရှာဖွေနေစဉ် ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ။ ငါတို့အသေအချာကြည့်သင့်တယ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြည်တော်ပြန်များအတွက်လမ်းညွှန်။ ဒါ့အပြင်အမြဲတမ်းအင်ဒီးယန်းနည်းမှန်လမ်းမှန်မသွားဘို့သေချာသည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများပါတယ်။ စော်ဘွားသင်တစ်ဦးသင့်လျော်သောလမ်းညွှန်နှင့်သတင်းအချက်အလက်ရှိခြင်းမရှိပါလျှင်သို့ရရန်လွယ်ကူပါတယ်စျေးကွက်မဟုတ်ပါဘူးလို့ပဲ။
သငျသညျအကွောငျးကိုအိန္ဒိယကနေလူများအတွက်အဖိုးတန်အကြံဉာဏ်ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အလွတ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလောကဝတ်အပေါ်လျှို့ဝှက်သတင်းအချက်အလက်ကိုသိသင့်ပါတယ်။ ထို့အပြင်သငျသညျခြွင်းချက်နေရာထိုင်ခင်းသတင်းအချက်အလက်သိသင့်နှင့် မိုဘိုင်း အသုံးပြု. ဒူဘိုင်းအစာရှောင်ခြင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်မည်သို့.
တူညီသောလက္ခဏာသက်သေအရည်အချင်းကိုနှင့်သင့်ကလေးတွေကျောင်းပေါ်အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ အတူတူအချက်အလက်များ၏ဘဏ်လုပ်ငန်းကိုအပိုင်းပိုင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအားကစားရုံနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးအဖြစ်အခြေခံအားလပ်သာယာအဆင်ပြေမှုများနှင့်အတူ။ အဆိုပါက်ဘ်ဆိုက်များအချို့ကိုအပေါ်ပေးအပ်ကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ဖော်ပြခြင်းမထောကျအကူပွုသတင်းမရှိကြပေ။ သငျသညျကိုသာအသုံးပြုသင့်ပါတယ် ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များများအတွက်အကောင်းဆုံးက်ဘ်ဆိုက်.
တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအတွက်သုံးစွဲဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် စုဆောင်းမှုန်ဆောင်မှုများ နှင့်အခြားကုမ္ပဏီများသည်ထိုကဲ့သို့သောန်ဆောင်မှုမပေးပါဘူး။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ paid အလုပ်ရှာဖွေအပေါ်မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ် 60 ရက်ပေါင်းစေပါဘူး။ ကူညီခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ၏အခြားစကားများကိုယ်စားပြုခုနှစ်တွင် အိန္ဒိယအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူ အင်ဒီးယန်းန်ဆောင်မှုများအတွက်ဒူဘိုင်း၌အကြှနျုပျတို့၏ဂျော့ဘ်ကို အသုံးပြု. ပတ်သတ်ပြီးအတူ။
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခြင်း ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ။ ပိုများသောအံ့သြဖွယ်ကောင်းစွာပြီးပြီ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနေရာပြောင်းရွှေ့လမ်းညွှန် ငါတို့ဒူဘိုင်းမှာရှာတွေ့နိုင်တယ် ဘလော့ဂ်.
ဒါကတစ်ဦးပုံဥပမာသည်အတိုင်း, အတိတ်နှစ်အတွင်းပြောဖြစ်ပါတယ် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအလုပ်ဈေးကွက် အများအပြားအနောက်တိုင်းပညာရှင်များများအတွက်တက်ကြွနှင့်နာမည်ကျော် destination သည်သို့တစ်ဦးပြည်ပရှိတပ်စခန်းကနေအသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန်, ယူအေအီး ခုနစျပါးစော်ဘွားများပြည်ထောင်စု, အဘူဒါဘီ, ဒူဘိုင်း, Ajman, Fujairah, Ras Al-Khaimah, Sharjah နှင့် Umm Al-Quwain ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။ အဘူဒါဘီ၏နှစ်ခုအဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစင်တာများနှင့် ဒူဘိုင်းထိပ်တန်းလူနေမှုပူဇော် နှင့် အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများ.
ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုနှင့်အတူ, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုတစ်နာမည်ကျော်, ပထမကမ္ဘာကဖြစ်ပါတယ် နိုင်ငံရေးနှင့်လူမှုရေးတည်ငြိမ်မှု၏ရှည်လျားသောသမိုင်းကြောင်းနှင့်အတူတိုင်းပြည် အိန္ဒိယသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးကြီးများ, အလွန်အမင်းပညာတတ်, ဘာသာပေါင်းစုံ, လူမျိုးပေါင်းစုံယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံလုပ်သားအင်အားဝါကြွားသောမျှော်လင့်ချက်အတွက် အိန္ဒိယကနေကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များယင်းဒေသအတွင်းနှင့်အခြားဘဏ္ဍာရေးစင်တာများမှအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးလင့်များနှင့်အတူ။ အဘို့အများစုကဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထား ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့အင်ဒီးယန်း ထိုကဲ့သို့သောနည်းပညာ, ကုန်သွယ်ရေး, အားကစား, ခရီးသွား, အဖြစ်ရည်မှန်းချက်ကြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းများပို့ဆောင်၏ 30 နှစ်အတွင်းတစ်ဦးသက်သေပြချက်စံချိန်ရှိပါတယ် နှင့်လုံခြုံရေးခရီးသွားလုပ်ငန်း.
အပြုသဘောဘက်တွင် ယူအေအီးအတွက်အိန္ဒိယလူမျိုးအဘို့အအလုပ်ရှာဖွေရေးအခွင့်အလမ်းများ တစ်ခုရှိပါတယ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို un-ဗျူရိုကရေစီချဉ်းကပ်မှုအကောင်းဆုံးအခွန်နှင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာအခြားဘဏ္ဍာရေးမက်လုံးပေးအချို့နှင့်အတူ။ ဒါ့အပြင်ဒူဘိုင်းစီးတီးအဆင့်မြင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများရှိကြောင်းကိုအောကျမေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ အဘို့နှင့်အကောင်းဆုံး အင်ဒီးယန်းများအတွက်သင်ကြားရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း.
အင်ဒီးယန်းအဘို့ဘေးကင်းလုံခြုံလူနေမှုအခြေအနေများထောက်ပြဖို့ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမှုဆောင်အရာရှိများနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများအတွက်နေရာချထားရန်ရေပန်းစားသောအရပ်ပါစေ။ အိန္ဒိယပြည်တော်ပြန်အများစုဟာ အစာရှောင်ခြင်းရာထူးတိုးတဲ့နေကြတယ်။ ဒါကြောင့်ဒူဘိုင်းမှရွှေ့ဖို့ကျိုးနပ်သည်။
နောက်ထပ် key ကိုအမှတ်: ယူအေအီးအတွင်းသင်အိန္ဒိယကနေကြုံတွေ့ရသည်လူများအကြားစစ်မှန်တဲ့မတူကွဲပြားမှုကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ သူတို့အခွအေနမြေားအောက်, နေထိုင်သူများကသာ 11% ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 21% ၏နေရာပြောင်းရွှေ့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်အာရပ်နိုင်ငံသားများဖြစ်ကြ၏ ဒူဘိုင်းနိုင်ငံတကာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူ။ အခြားနိုင်ငံများအနေဖြင့်, 57% တောင်အာရှသားဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကျန်ရှိသော 11% အရှေ့အာရှသားများနှင့်အနောက်တိုင်းသားဖြစ်ကြ၏။ ယဉ်ကျေးမှု, ဘာသာစကားနှင့်ဘာသာတရားများ၏စစ်မှန်သောရောနှောနိုင်ငံများတွင်အမျိုးမျိုးကနေကျွမ်းကျင်သူများအားလုံးအဆင့်ဆင့်မှာကျွမ်းကျင်မှုကွာဟချက်ကိုဖြည့်အတူပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ကြသည်။
ဤအကြောင်းကြောင့်, ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အလမ်းကိုပြသနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ် nဒူဘိုင်းအတွက် EW အလုပ်အကိုင်များ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံပေးချက်ကိုအနုတ်လက္ခဏာဘက်မှာ ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်ရှာခြင်းသည်အလွန်ရှည်လျားသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်သတိရရမယ့်အရာကမင်းတို့အတွက်လွယ်ကူအောင်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်မင်းကိုဖမ်းနိုင်အောင်ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အထောက်အထားအရှိဆုံး မိုဘိုင်းဖုန်း ဒူဘိုင်းအတွက်နေရာလွတ်။ ဒါဟာဒူဘိုင်းအတွက်လူမှုမီဒီယာဖြစ်ပါသည်။
ပင်လယ်ကွေ့တွင်ယူအေအီးနှင့်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအတွက်အိန္ဒိယလူမျိုးအဘို့ဥပမာ, အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများ။ ထိုသူတို့အဘို့အိပ်မက်သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်။ ရုံအာရပ်စော်ဘွားပြည်ထောင်စုသည်၏မြို့တော်၌ထားရမည်ဖို့အကောင်းဆုံး tool ကိုရှင်းလင်းဖို့ WhatsApp ကိုအဖွဲ့များ ပင်လယ်ကွေ့နှင့်တပြင်လုံးကိုအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာ
သငျသညျအစားအဘူဒါဘီမြို့တော်ပြောင်းရွှေ့သင့်ပါတယ်ဘာလို့အနည်းငယ်အချက်များရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်စော်ဘွား၏မြို့တော်အတွက်အမြဲအသစ်အကန်ထရိုက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းရှိနေရာချနေကြတယ်, ကြီးထွားလာနေပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ပင် LinkedIn နှင့် Facebook မကြာသေးမီကအဲဒီမှာရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော်ငြားလည်း, အဘူဒါဘီဟာအလွန်ကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်ပါသည် ကားအရောင်းမန်နေဂျာ, အင်ဂျင်နီယာများနှင့်ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်သားများသည်။ ဒီတော့ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အ, ကအားလုံးကိုအတွေ့အကြုံနှင့်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး status ကိုအပေါ်မူတည်ပါသည်။
အဘူဒါဘီမြို့ကလူကောင်းသောတည်ငြိမ်များအတွက်အလွန်ကောင်းသောအခြေချနေထိုင်နေပါတယ်။ မိသားစုများနှင့်ကိုယ်ပိုင်နေအိမ်များနှင့်အတူတဦးတည်း။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကြေညာချက်များပန်းခြံနှင့်နည်းပါးလာဆူညံသံအများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာအဘူဒါဘီ၌အသစ်သောအခွင့်အလမ်းများကိုအစဉ်အမြဲရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဤမြို့ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဘက်မှာကိုယ်ပိုင်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် Mini-အစိုးရအပေးအယူရှိတယ်အောက်မေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့အနာဂတ်က c များအတွက်တဝတည်းဖြစ်ကြ၏ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအမြဲတမ်းအကြီးမားဆုံးမြို့ကြီးများအကြံပေးထိုကဲ့သို့သော CEO နဲ့ CFO အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများအဖြစ် areers.
ဒူဘိုင်းအတွက်ကုန်ကျစရိတ်: တစ်လိုလားတဲ့သူသြဇာလွှမ်းမိုးမှုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အ။ မကြာခဏသတိမမူအမှတ်ရိုးရှင်းစွာတစ်ဦးတည်းမသွားဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, 6500AED များအတွက်အလုပ်လုပ်-လူတန်းစားဘဝများကဲ့သို့အလွန်နိမ့်အဆင့်တွင်အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးသားဒူဘိုင်းကူးလာရန် paid ခရီးသွားကုန်ကျစရိတ်ဖော်ပြထားခြင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့စျေးပေါအသက်တာ၏အလငျး၌အတွက် ဒူဘိုင်း, သငျသညျဒူဘိုင်းဧရိယာအတွင်းရှိငှား၏ကုန်ကျစရိတ်များပါဝင်သည်ရန်လိုအပ်ပါတယ် ကိုယ့်ခရီးသွားမှ သင့်လုပ်ငန်းခွင်ဖို့အချိန်ပေါ်မှာ။ အဖြစ်ကားများအတွက်သက်တမ်းတိုးအခကြေးငွေနှင့်အတူသင့်ကားများအတွက်ဓာတ်ဆီ, မော်တော်ကားအာမခံနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်။
စူပါအစာရှောင်ခြင်းတစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်နိုင်ရန်အလွန်ကောင်းသော option ကိုရန်ဖြစ်ပါသည် ယူအေအီးအတွက် Automotive အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေ။ အလုပ်အကိုင်ဒီလိုမျိုးနှင့်အတူ, သင်သည်သင်၏အလုပ်ခွင်မှအခမဲ့ကားတစ်စီးနှင့်မောင်းနှင်မှုကိုလက်ခံရရှိရန်အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မည်။ အပြုသဘောဘက်တွင်, သင်သာဓာတ်ဆီနှင့်အာမခံအတွက်ပေးချေပါလိမ့်မယ်။
ဟုတ်ပါတယ်, အင်ဒီးယန်းများနှင့်အခြားတပါးအမြိုးသားတို့အကြားကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ရှိသေး၏။ ဥပမာ, ဒူဘိုင်းမှပြောင်းရွှေ့ Philipino လုပ်သားများ။ ထိုသူတို့ကဤအံ့သြဖွယ်ရာအရပျတှငျနထေိုငျကွသညျ။ ဒါပေမယ့်သူတို့ထဲကအများစုဟာအိန္ဒိယအဖြစ်နေထိုင်နေကြသည်မဟုတ်။ သူတို့ကအများကြီးနိမ့်လုပ်ခရတဲ့နေကြသည်။ ထိုအခါသူတို့ကိုအများစုယူအေအီးအတွက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေနေကောင်းသောအလုပ်အကိုင်နှင့်အလုပ်အကိုင်ရတဲ့မဟုတ်ပါဘူး။
အတူတူရေ, လျှပ်စစ်မီး, ဖုန်းနှင့်အတူအိမ်ထောင်စုဥပဒေကြမ်းများသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူစကားပြောနိုင်မည်အကြောင်း, ၏သင်တန်း, အင်တာနက်, ထိုမှတပါးအစားအစာ, နှင့်အစားအသောက်ဆိုင်ဒါ့အပြင်သို့မဟုတ်ပင်စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်အခြိနျမှနျမှ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သငျသညျဒူဘိုင်း၌သင်တို့နှင့်အတူရှိချင်ပါတယ်တဲ့သူမိသားစု / မှီခိုနှင့်အတူ coupled နိုင်ပါသည်။ နှိုင်းယှဉ်သင့်ရဲ့အသုံးစရိတ်ရန်သင့်အားဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့လူတစ်ဦးချင်းစီအဘို့အ AED 2000 န်းကျင်ကိုထည့်သွင်းသင့်ပါသည်။ ထူးခြားသည်အခြားနိုင်ငံများသို့, စံအလုပ်သမားလုပ်သားများအလွန်စျေးပေါဖြစ်လာသည်။ သို့သျောလညျး, ဒူဘိုင်းအတွက်အလွန်ကောင်းသောလုပ်ခ၏အလငျး၌, သင်တို့အဘို့တစ်အိမ်ဖော်ငှားလို့ရပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအချိန်အလုပ်အကိုင်များ ဒေသခံအချို့ထံမှ ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများက သငျသညျသနျ့ရှငျးနသင့်အိမ်စောင့်ရှောက်ဖို့လိုပါတယ်လျှင်။
ယူအေအီးအတွက်အိန္ဒိယလူမျိုးများအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများ ပြည်တော်ပြန်များအတွက်အံ့သြဖွယ်အသစ်များကို options များဖြစ်လာသည်။ ဒီတော့နေပါစေသင်လက်ရှိရရန်ရှာဖွေနေနေကြတယ်ဆိုတာကိုအနေအထား။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီသင့်ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်ပေးရန်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့အသစ်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီများအတွက်ငှားရမ်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအလွန်တန်ဖိုးရှိသောသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ဘယ်မှာအာရှအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးဘို့ငါတို့ဘလော့ဂ်စီမံခန့်ခွဲရသည်။
ရာထူး အဘို့အခွင့်အလမ်းများ အင်ဒီးယန်း ယူအေအီးအတွက်
ဤစကားမှန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ ဒူဘိုင်းအတွက်ကုမ္ပဏီ ထောက်ပြသည် အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်များအတွက်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အကောင်းဆုံးငှားရမ်းနည်းဗျူဟာ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Dubai City ရှိရာထူးအရေအတွက်ကိုအခြေခံပြီးကြိုးစားရယူရန်ကြိုးစားနေသည်။ ငါတို့သည်အစဉ်အမြဲအလုပ်လုပ်ကြသည် ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ နှင့် IT ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ။ ငါတို့သည်သင်တို့ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုရယူချင်သည်အတိုင်းသလောက်ငါတို့သည်သင်တို့လိုအပျကွောငျးအလုပ်ရှင်များ profile များကိုဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီအစဉ်အမြဲကြိုးစားနေ များအတွက်နေရာချထား၏မြင့်မားမှုနှုန်းအောင်မြင်ရန် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားကြောင့်ဝတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်န်ထမ်းခေါ်ယူမှု အမြဲတမ်းအသစ်သောစော်ဘွားအလုပ်အကိုင်များနှင့်အတူပျော်ရွှင်အိန္ဒိယအမှုဆောင်အရာရှိစောင့်ရှောက်ခြင်း။
နောက်ထပ် key ကိုအမှတ်ဖြစ်ပါသည် ကျွမ်းကျင်သူများအူပည်ူပည််ထမ်းခေါ်ယူမှုအေဂျင်စီများ သူတို့သည်အစဉ်မပြတ်ဒူဘိုင်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူများနှင့်အတူ shared လိုအပ်ချက်စောင့်ရှောက်ခြင်း။ သို့သော်ငြားလည်း, ဒူဘိုင်းမြို့ ကုမ္ပဏီသည်ရိုးရှင်းသောအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်များကိုသာရယူခြင်းထက်ဖြစ်သည်။ အလုပ်ရှာဖွေသူများနှင့်ယခုလက်ရှိ Headhunters ကဲ့သို့သောသက်ဆိုင်သူများနှင့်အမြဲတမ်းဆက်သွယ်သည်။ စုဆောင်းရေးအေဂျင်စီများနှင့် HR ငှားရမ်းမန်နေဂျာ။
ထို့ပြင်အလွန်ခက်ခဲသိသာဆိုအဖြစ်အပျက် ကျနော်တို့တောင်မှပါကစ္စတန်ကနေအများအပြားသတင်းရပ်ကွက်မှတဆင့်သူတို့ကိုရောက်ရှိနေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးဌာန၌, သင်ရောက်ရှိသင့်တယ် အကောင်းဆုံး စုဆောင်းမှုအေးဂျ ဒူဘိုင်းအတွက်ဒါကိုလုပ်ဖို့ \_ t Google က ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေး ပြီးတော့ကြိုးစားပါ ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်ထိပ်တန်းရှာဖွေစုဆောင်းရှာတွေ့.
တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ခဲ့ကြကြောင်းလည်းစုဆောင်းမှုအေးဂျင့်များကအမြဲဂျော့ဘ်များအတွက် Google တွင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်သငျသညျကိုနိုင်ငံတကာများအတွက်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ် မွမ်ဘိုင်းမှာရှိတဲ့စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများအလားတူယူအေအီးအေဂျင်စီများမှသင်နှင့်အတူကူညီနိုင်သူ Hyderabad အတွက်, ဒါမှမဟုတ်ဒေသခံ headhunters ဒူဘိုင်းတွင်အွန်လိုင်းအလုပ်အကိုင်များ။ ဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များအေဂျင်စီများအိန္ဒိယတွင်ပါရမီလူများနှင့်များ၏သင်တန်းအတွေ့အကြုံရှိကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရှာဖွေတာ, ပြီးတော့စာရင်းကိုင်ဥပမာအဘို့ထိုသူတို့အားမရအထူး ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အခြားအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ စော်ဘွားအလုပ်အကိုင်များ.
ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းသင်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေသူအဖြစ်။ ကျိန်းသေတဲ့အတှကျတိုကျပှဲတစျဆငျ့တလျှောက်တွင်ချောမွေ့ပါလိမ့်မယ် စော်ဘွားအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ကွဲပြားခြားနားသော profile များကိုအတူ။ ဥပမာဒူဘိုင်းရှိဟိုတယ်အလုပ်များသည်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်, သငျသညျလညျးအဘို့စစ်တိုက်သင့်ပါတယ် ဒူဘိုင်းရှိလုံခြုံရေးအလုပ်များ LinkedIn ပေါ်မှာငါတို့ကုမ္ပဏီနှင့်မျှဝေ ပြီးတော့ရေရှည်မှာ ဒူဘိုင်းအတွက်ကားမောင်းသူအလုပ်အကိုင်များ သူတို့ရရန်အလွန်လွယ်ကူသောကြောင့်။ ထိုအခါအလားအလာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အမြောက်အများအင်တာဗျူးများတန်းစီခိုင်းတယ်။ ဒူဘိုင်းအလုပ်ငှားရမ်း အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်မန်နေဂျာအမြဲအိန္ဒိယကနေလတ်ဆတ်တဲ့လူများအတွက်ရှာဖွေနေ။ သိသာထင်ရှားတဲ့တက် Sum နှင့်သူတို့ဒူဘိုင်းထဲတွင်ရှာတွေ့ရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်အစဉ်အမြဲရှိပါတယ်မှ ခြွင်းချက်လုပ်ခအဘို့ခဲယဉ်းလုပ်ကိုင်ဖို့အဆင်သင့်.
ok နှင့်အတူစတင်, သငျသညျအိန်ဒိယနိုငျငံကနေဖြစ်ကြပြီးအာရှကနေကျွမ်းကျင်သူများအများစုစည်းရုံးနေကြပါတယ်။ အကျိုးဆက်အသေးစိတ်-oriented တိုတိုအတွင်းအလွန်ထက်မြက်၏သင်တန်းအရည်အချင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ် oriented enterprising အခြားသူများ။ ကျနော်တို့အများကြီးပြီးမြောက် နေရာချထား အိန္ဒိယကနေ ဒူဘိုင်းမှ။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတခုအဖြစ်အမြဲတမ်းကျနော်တို့အာရှကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ client များအတွက်စုဆောင်းမှုညှိနှိုင်း၏ခြွင်းချက်ရလဒ်ကယ်နှုတ်တော်မူသေချာသည်။ အညီအမျှအရေးကြီးသောငါတို့အဘို့အကြောင်းဖော်ပြခြင်းမ 60 ရက်ပေါင်းအချိန်အပိုင်းအခြားအထိခဲ့ကြကြောင်းလည်း 90 အတွက်ဒူဘိုင်းမြို့ရာထူးသတ်မှတ်ထားသောအရေအတွက်ပိတ်ဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဖြစ်မှန်မှာတော့ယူအေအီး၌အကြှနျုပျတို့၏ကုမ္ပဏီအစဉ်အမြဲကြိုးစားနေ အိန္ဒိယအလုပ်ရှာဖွေသူများနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများနေရာ ဒူဘိုင်းအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်အလုပ်အကိုင်များများအတွက်သာ။
အလုပ်ရှာဖွေရေး Start နှင့်ယူအေအီးအတွက်ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုကိုရ
ဒူဘိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများအားဖြင့်အမည်ရဖြစ်ပါသည် ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်အကျဉ်းချုပ်တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်လက်စားချေယူထိပ်တန်းသာယာဝပြောတဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်လစဉ်လတိုင်းဤမျှလောက်များစွာသောအမှုဆောင်အရာရှိ အိန္ဒိယကနေဒူဘိုင်းအတွက်ရောင်းအားအလုပ်အကိုင်များဘို့ကျော်လာ။ အရေးကြီးသောပိုက်ဆံအနေအထားလုပ်ထားတဲ့သင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်ငွေရှာဖို့ကူညီနိုင်သည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
သူတို့အခွအေနမြေိုး, ဒူဘိုင်းကမ္ဘာပေါ်မှာစျေးအကြီးဆုံးနှင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝမြို့ကြီးများ၏တဦးတည်းဖြစ်လာသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အစကားပြောသော အိန္ဒိယများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက် ဘယ်မှာအာရှသားအများစုဇိမ်ခံဘဝနေထိုင်နေကြရသည်။ မှတ်ချက်ချခဲ့ပြီးအဖြစ် သငျသညျယူအေအီးလည်ပတ်ခဲ့သည့်အခါ တိုင်းပြည်ကြွယ်ဝသောပုဂ္ဂိုလ်များအပြည့်အဝလည်းဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင်သည်အဘယ်မှာရှိသင်အလွယ်တကူပိုလတ်ဆတ်များအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသည် hit မှသိကြပါလိမ့်မယ်လျှင်။ နောက်ဆုံးတွင်, သင်တို့နှင့်အတူသင်ကူညီနိုင်သူကြွယ်ဝသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မယ် ဒူဘိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေး.
ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းသင်သည်နောက်ဆုံးတော့သင်ဟာဇိမ်ခံဘဝအသကျရှငျစတင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ပွဲချင်းပြီးအပေါ်တစ်ဦးအလုပ်ရခဲ့တယ်သူကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်လိမ့်မည်သည့်အခါ။ နေသမျှကာလပတ်လုံးဒူဘိုင်းမြို့အဖြစ်မိုးမျှော်တိုက်၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ကအပေါ်တစ်ဦးကိုင်ရ။ ကျွမ်းကျင်သူများတစ်ဦးအဘို့အအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဟိုတယ်များအပါအဝင်အချိန်အားဖြင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း။ ရံဖန်ရံခါနေရာထိုင်ခင်း penthouse နှင့် ယူအေအီးအတွက်ရရှိနိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဖြစ်ကုန်တိုက်ကြီးတွေ.
ထိုအခါမြို့အတွင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်သင်တတ်နိုင်သမျှဖြစ်လာသည်။ နောက်ခံ, ဒီအံ့သြဖွယ်ရာအရပျမြားကိုလညျးကမ်ဘာပျေါတှငျသငျ၏မယားများအတွက်ထူးချွန်စျေးဝယ်ခရီးစဉ်တစ်ဦးအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည်။ သင်အဲဒီမှာ get နှင့်သင်ငွေရှာစတင်ရန်သောအခါအသိရကြလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးကိုရှာဖွေနေ၏ဗဟိုအတွက် အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်အကိုင်အ ဒူဘိုင်းရဲ့ဘဝမှာမျက်စိရှိသည်နှင့်ပါစေ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာရရှိနိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း.
ပထမဦးဆုံးဌာန၌တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာနေလူတိုင်းစိတ်တွင်ဒူဘိုင်းဖြစ်ပါတယ်ရှိပါတယ်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်တစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူသကဲ့သို့သင်တို့ hit သငျ့သညျရှိရာအဘူဒါဘီလည်းရှိသေး၏။ တိုင်း ယူအေအီးအတွက်အိန္ဒိယ ရိုးသားတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြောင်းလဲမှုကိုရှာဖွေနေသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ချိန်တည်းမှာလာမနေပါနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအမဲလိုက်အဘို့ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းသွားရောက်လည်ပတ်ဗီဇာပေါ်မှာ။ အဖြစ်မှန်မှာတော့ဤမျှလောက်များစွာသောအိန္ဒိယလူမျိုးသူတို့တစ်တွေအလည်အပတ်ဗီဇာအပေါ်တစ်ဦးအလုပ်ရလိမ့်မည်ဟုပြောသည်။ အဆိုပါ 7th စော်ဘွားမန်နေဂျာမှတက်အဘယ်သူမျှမအတွေ့အကြုံကိုလုပ်သားများထံမှလုပ်သားအင်အားအပေါငျးတို့သမျိုးကိုရှာကြ၏။
ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်ရရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာအနိမ့်ဆုံးအဆင့်မှစတင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ စီမံခန့်ခွဲမှုအလုပ်များ ကမ်းလှမ်းမှုကိုယူအေအီးအတွက်အများကြီးကြော်ငြာကြသည်မဟုတ်။ လူသိများသောလူသိများသောလူအများစုတို့သည်အလုပ်များကိုကမ်းလှမ်းသည်ကိုကြော်ငြာခြင်းမရှိပါ။ အဆိုပါကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်အမြန်ဆုံး အဘယ်သူအားမျှအတွေ့အကြုံရှိလူများအတွက်လမ်း low-level အလုပ်အကိုင်များရရှိရန်ဖြစ်ပါသည်.
အတွက်ရှာဖွေနေအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏ရည်ရွယ်ချက် ဒူဘိုင်း CITY: ယူအေအီးကူးလာကြသူအိန္ဒိယလူမျိုး။ အထူးသဖြင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာဟိုတယ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာကြံ, မယ့်စော်ဘွား။ ဘယ်တော့မှမအစဉ်အဆက်အပေါင်းတို့ထက်အလည်အပတ်ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာအပေါ်လာသင့်ပါတယ်။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, တိုင်းအိန္ဒိယအလုပ်ရှာဖွေသူ၎င်းတို့၏အလုပ်အကိုင်အဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ဗီဇာအပေါ်ကမ်းလှမ်း authenticate ရမည်ဖြစ်သည်။ ကြောင်းပေါ် base လာမယ့်အိန္ဒိယကနေလူတွေ ပါမစ်ဗီဇာအတွက်စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများကထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်မျှော်လင့်ကြောင်းပါ။ တဦးတည်းအရာသည်လက်ယာနှင့်တိုင်းပြည်အတွင်းရောက်ရှိလာရှေ့တော်၌ထိုယူအေအီးအတွက်အလုပ်လုပ်ဗီဇာရရန်ကြိုးစားပါဘူး။ ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားစေရန်, စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာပင်အိန္ဒိယကောင်စစ်ဝန်ရုံး duping ၏ကြီးထွားလာနံပါတ်များကိုရှိတယ်လို့ပြောပါတယ် အသစ်ကနိုင်ငံတကာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူ အလွန်ဘုံဗီဇာလိမ်လည်မှုအစီအစဉ်များ။
ဥပမာ, 2018 Gov အတွက်အကြံပေးအဖွဲ့ဗီဇာလိမ်လည်မှုမြင့်မားသောအရေအတွက်ကိုအောက်ပါအတိုင်း။ အင်ဒီးယန်းမကောင်းတဲ့၏နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်သားကောင်ဖြစ်လာကြောင်းနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့်လည်ပတ်မှုများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေ။ တစ်ခုခုကိုအမှု၌, အလုပ်ရှာနေကြသူအာရှကလူကောင်စစ်ဝန်ရုံးနှင့်အတူစကားပြောသင့်ပါတယ်။ သည်အခြားအများအပြားရှိပါတယ်ကြောင့်, အိန္ဒိယလုပ်သားများသည် သူတစ်ပုံမှန်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအေးဂျင့်သို့မဟုတ်အလုပ်ရှင်များအားဖြင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအတုအယောင်ပြုလုပ်ထားခြင်း။ ရေရှည်မှာခုနှစ်တွင်အာရှလုပ်သားများအလုပ်သို့မဟုတ်လုပ်ခသူတို့ကိုပေးဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေရဘူး။
ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ, ယူအေအီးနှင့်အတူကြီးမားတဲ့ပြဿနာရှိပါတယ် အိန္ဒိယအဘို့ဗီဇာ။ အခြိနျမှနျမှမွန်ဘိုင်းကနေအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူများအဘူဒါဘီအချို့အလွန်ကောင်းသောရောင်းအားအလုပ်အကိုင်များကတိပေးခဲ့ကြပြီးတစ်ဦးရုတ်တရက်အားလုံးပြန်ဘာမျှတယ်။ သို့သော်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူတစ်ဦးဆောက်လုပ်ရေးမှာနိမ့်ဆုံးလုပ်ခလစာများအတွက်အလုပ်သမားအဖြစ်လုပ်ကိုင်ဖို့ပြောသည်, ပြီးတော့သူကအိန္ဒိယအတွက်ပိုပြီးငွေရှာမယ်လို့သူကဆက်ပြောသည်ခဲ့ဆိုက်ရောက်အပေါ်နောက်ခံ၌တည်၏။ သင်တို့သည်လည်းဘို့ငါတို့အလုပ်အကိုင်များအုပ်စုများ join လို့ရပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်ပါကစ္စတန်လုပ်သားများ ရုံရှင်းရှင်းလင်းလင်းရူပါရုံကိုရှိသည်ဖို့။ ဘယ်လိုကတခြားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများစီမံခန့်ခွဲလူအမျိုးမျိုး။ ပင် ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံအတွင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုရှာဖွေဖို့ဘယ်လို နှင့်သတင်းနှင့်အကြံဥာဏ်-bits အများကြီးပို။
2017 ၏ပထမဦးဆုံးဝက်အတွင်းပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိအိန္ဒိယကောင်စစ်ဝန်ရုံးယူအေအီးကနေအစီရင်ခံစာကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်အိန္ဒိယကလူကနေ 540 အလုပ်သမားတိုင်ကြားမှုများစုစုပေါင်းယူအေအီးအတွက်ပြေလည်ခဲ့ဟုသူတို့အဘူဒါဘီသို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းစီးတီးအတွက်အလုပ်ရခဲ့တယ်။ အပြုသဘောဘက်တွင်အစီရင်ခံစာကဆိုသည် ယူအေအီးအတွက်အာရှကျွမ်းကျင်သူများအလုပျသမား သူတို့တစ်တွေကောင်းစွာ-paid တယ်တဲ့အခါမှာအလွန်ပျော်ရွှင်နေကြသည် ဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အိန္ဒိယအတွက်ဘဏ်လုပ်ငန်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း.
ဒူဘိုင်း City တွင်အကောင်းဆုံး-ပေးဆောင်အလုပ်အကိုင်များ?
ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူထုတ်ဖေါ်ချင်ပါတယ်နောက်ထပ် key ကိုအမှတ်ဒူဘိုင်း City တွင်အကောင်းဆုံး-ပေးဆောင်အလုပ်အကိုင်များဖြစ်ပါတယ် ယူအေအီးအတွက်အိန္ဒိယလူမျိုးအဘို့အအလုပ်ရှာဖွေရေးအခွင့်အလမ်းများ။ အလုပ်၏ဤကြင်နာကျော်ကြားထက်ပို !. CFO နှင့် CEO ဖြစ်သူအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုနေဆဲအာရှပြည်တော်ပြန်များအတွက်ဖွင့်။ ဒါကြောင့်သင်အမြင့်မားဒီဂရီ Level ဖြင့်ကောင်းသောအတွေ့အကြုံနှင့်ကောင်းစွာပညာရေးရှိခြင်းလျှင်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ ဒူဘိုင်းနှင့်အဗြဒါဘီအတွက်လုပ်ခအဘို့အပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း 300 အလုပ်ခေါင်းစဉ်ထက်ပိုမိုရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ယူအေအီးအတွက်အဓိကစက်မှုလုပ်ငန်းအလုပ်တစ်ခုရဖို့ကိုအကောင်းဆုံးတဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်သင်တို့ကိုအများဆုံးပေးဆောင်ရသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေအသစ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ကြိုးစားသင့်တယ်, စကားပြော တောင်အာဖရိကကနေကိုယ်စားလှယ်လောင်းအိပ်မက်မက်။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, စဉ်းစားရန်အသှငျအပွငျ၏ထည့်သွင်းစဉ်းစားတွေအများကြီးရှိသေး၏။ တစ်ဦးက start ယူအေအီးအတွက်အသစ်တခုအိပ်မက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုရွေးချယ်တဲ့အခါ။
ဗိုလ်မှူးအာရုံကိုသငျသညျသင့်ကြောင်း အာရုံစိုက်နိမ့်လုပ်အားခ၏အမှု၌တစ်ဦးတစ်ဦးအလုပ်-ဘဝဟန်ချက်လည်းမရှိ ငါကပိုအခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေရပါမယ်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်ငါ့အဘို့ချိန်ညှိသို့မဟုတ်စီမံခန့်ခွဲအလုပ်၏အနှစ်သာရပင်ဖြစ်သည် ?. ဒါဟာကောင်းသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုးတက်မှုနှုန်းမျှော်လင့်ထားသကဲ့သို့ပိုကောင်းအခွန်လွတ်ဝင်ငွေအဘို့ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုပူဇော်ပါသလား? သို့မဟုတ်ပါကအကြှနျုပျကိုလက်ပေါ်ငွေအများကြီးရရှိစေမည်ပါဘူး ?. ဒီတော့ကြည့်ကြ ယူအေအီးနှင့်ပင်လယ်ကွေ့တွင်အင်ဒီးယန်းအဘို့အအလုပ်ရှာဖွေရေးအခွင့်အလမ်းများ နှင့်ကားအဘယ်သို့ အကောင်းဆုံးကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း option ကို.
အကောင်းဆုံးများထဲမှသင်တန်း၏ Chief Executive Officer ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေး
လစဉ်ပျမ်းမျှ အံ့သြဖွယ်ပင်စင်၏အလင်း၌ပေးဆောင်: Dh120,000
အတူတကွလစာအကွာအဝေးနှင့်အတူ: Dh65,000 မှ Dh145,000
နှိုင်းယှဉ်လစာအကွာအဝေး: Dh60,000 မှ Dh100,000
နှိုင်းယှဉ်လစာအကွာအဝေး: Dh55,000 မှ Dh90,000
စိတ်ထဲ၌ဤအတူတစ်ဦးကသူတို့လစာအကွာအဝေးရှိခြင်းနေကြသည်: Dh53,750 မှ Dh99,500
ထို့ပြင်အလွန်ခဲယဉ်းအလုပ် အိန္ဒိယအဖြစ်ယူအေအီးရ နှင့်ပင်စင်အပါအဝင်ပျမ်းမျှအားလစဉ်လစာ: Dh67,000
နှိုင်းယှဉ်လစာအကွာအဝေး: Dh60,000 မှ Dh116,000
အတူတူနဲ့ Top-rated ပင်လယ်ကွေ့အလုပ်အကိုင်များ ဆရာဝန်လစာအကွာအဝေး: Dh70,000 မှ Dh220,000
သက်ဆိုင်ရာလစာ အထူးကုနှောက်နှင့်အာရုံကြောပါရဂူ, ညီတူညီမျှကလေးကစိတ်ရောဂါကုဆရာဝန် / စိတ်ပညာရှင်နှင့်သွေးကြောခွဲစိတ်အတူသားဖွားမီးယပ်ရောဂါအကြီးအကဲများဖော်ပြထားခြင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စပေါ် 600,000 ထက်ပိုမိုသစ်ကိုလျှောက်ထားရှိပါတယ်။ ဒူဘိုင်းအတွက်နေ့တိုင်းအသစ်သောအလုပ်အကိုင်များ အိန္ဒိယကျွမ်းကျင်သူများကြှနျုပျတို့၏ website မှစီးဆင်းနေကြသည်များအတွက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသစ်ကိုပျော်ရွှင်နောက်လိုက်တွေအများကြီးရှိခြင်းနှင့်အလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများသာအိန္ဒိယကနေ။ ကျနော်တို့တိုင်းလူတစ်ဦးတစ်ဦးရှိသင့်ကြောင်းယုံကြည်နေကြသည်ကြောင့်, ကမ်ဘာပျေါမှာအလုပ်အများဆုံးစျေးကွက်အတွက်သက်သေပြဖို့အခွင့်အလမ်း.
ကျနော်တို့ဒူဘိုင်းအတွက်ကုမ္ပဏီငှားရမ်းတဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့မျိုးတည်ဆောက်ထားပါတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိကျနော်တို့အိန္ဒိယကနေထက်ပိုမို 1,400,000 ဧည့်သည်များကကူညီပေးခဲ့ကြပါပြီ။ ကအများဆုံး, အစဉ်မပြတ်7ရက်ပေါင်းတစ်ပါတ်ကိုသင်ကိုက်ညီသောအခါကြှနျုပျတို့ပွင့်လင်းဖြစ်ကြ၏န်ဆောင်မှုများအတွက်မှတ်ချက်ပြုထားသည်အဖြစ်။ ရေရှည်, သငျသညျရက်ချိန်းမရှိဘဲကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီသို့လမ်းလျှောက်နိုင်ပါတယ်.
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, သင်ကအတူထွက်လမ်းလျှောက်နိုင်ပါတယ် အလုပ်လုပ်အလုပ်ရှာဖွေနေအကောင့်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ငါတို့သည်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းအိန္ဒိယရှာဖွေနေအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအကြောင်းကိုစကားပြော။ ကျိန်းသေ, နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်, ကျွန်ုပ်တို့သည်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌သင်တို့၏ဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံရန်စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။ သေချာဘို့အသင်တို့သည်ငါတို့၏သည်အခြားအဖွဲ့ဝင်တွေထဲကနေအကောင်းတန်ဖိုးရှိသောသတင်းအချက်အလက်ရနိုင်တယ်။ သင်ကအဖွဲ့ဝင်များအပိုင်းကိုသွားနှင့်ပြည်တော်ပြန်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏တွေနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျဤမျှလောက်များစွာသောရှိကွောငျးသိသလား အိန္ဒိယကျွမ်းကျင်သူများရဲ့ CEO စော်ဘွားအတွက်အလုပ်လုပ်? ဥပမာအားဖြင့်, ဒူဘိုင်းအတွက် Google ကအလုပ်အကိုင်အခွင့်အယခုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒီတော့ဥပမာ, ယူအေအီးအတွက်အိန္ဒိယလူမျိုးအဘို့အသစ်ကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုလမ်းဖွင့်ထားကြသည်။ အိန္ဒိယကျွမ်းကျင်သူများအများအားဖြင့်စော်ဘွားများအတွက်ကြိုဆိုနေကြသည်။ နဲ့ကြီးမားတဲ့အဖွဲ့အစည်းများနေ့တိုင်းအိန္ဒိယကနေလူသစ်ငှားရမ်းထားပါသည်။
အာရှပြည်တော်ပြန်များအတွက်အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနေရာလွတ်၏နောက်ထပ်ဥပမာ WhatsApp ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအထူးသဖြင့်ကုမ္ပဏီခုနှစ်တွင်အသစ်အာရှအမှုဆောင်အရာရှိအထူးသဖြင့်အိုင်တီဌာနအတွက်အတွေ့အကြုံတစ်ခုအဆင့်မြင့်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ နားလည်သဘောပေါက်ရန်အလွန်အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီလည်း WhatsApp ကိုအပေါ်ငှားရမ်း။ ဒါကြောင့်သင်ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အတွေ့အကြုံကောင်းတစ်ခုအသိရှိခြင်းလျှင်။ ကျနော်တို့ပြီးသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့အကြီးတန်းမန်နေဂျာယူကြပြီကြောင့်အနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, ကျွန်တော်တစ်ဦး CEO ဖြစ်သူသို့မဟုတ်အကြီးတန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအနေအထားကိုမပေးပါဘူး။
ယူအေအီးအတွက်အိန္ဒိယလူမျိုးအဘို့အအလုပ်ရှာဖွေရေးအခွင့်အလမ်းများ - သူတို့ကဒူဘိုင်း၌သင်တို့အဘို့အများမှာ.
ကျိန်းသေဒူဘိုင်း, ဒီတီဗီမှာအဓိကကြော်ငြာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးသည်ယခုအခါရှိပါတယ် ပင်လယ်ကွေ့ဒေသမှလာမယ့်အသစ်သောစီမံကိန်းများတွေအများကြီး။ ထိုမှတပါး, ဆော်ဒီအာရေဗျ ယခုအခါဆော်ဒီကုမ္ပဏီများအတွက်အလုပ်လုပ်နေသောအိန္ဒိယလူမျိုးများအတွက်ကန့်သတ်ချက်အချို့ပြုလုပ်ထားသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ကာတာ, 2-3 နှစ်ပေါင်းစာချုပ်များထက်ပိုပြီးဘာမှပေးခြင်းဘယ်တော့မှ။ ဒါကြောင့်စမတ်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ငါတို့ကုမ္ပဏီကစော်ဘွားများပြည်ထောင်စုကိုအကြံပေးသည်။ 30,000 အလုပ်အကိုင်အသစ်များသည် Emirates မြို့တော်ရှိလူသစ်များကိုသာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပေါင်းထည့်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်သင့်အားစည်းရုံးသိမ်းသွင်းသင့်ကြောင်းနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်ယူအေအီးအတွက်အိန္ဒိယလူမျိုး၏ပမာဏဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းငယ်သန်းပေါင်းများစွာဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်အိန္ဒိယပြည်တော်ပြန်မှတ်ပုံတင်ထက်ပိုမိုရှိပါသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူအာမခံချက်တစ်နည်းနည်းပေးသင့်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လူသန်းပေါင်းများစွာစီမံခန့်ခွဲခဲ့ကြပါလျှင်ယူအေအီးအတွက်ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရရန်ရှိသည်။ သင်တို့သည်လည်းကိုယ့်ကိုကိုယ်အကောင်းအလုပ်အကိုင်အများအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအားဖြင့်သင်တို့ကိုအစဉ်အမြဲသင်တို့သည်ငါတို့၏လူမှုကွန်ယက်ကျော်လျှောက်ထားတဲ့အခါမှာသေချာပါစေနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျကျိန်းသေထားရှိသွားမည်ဖြစ်ပြီးယူအေအီးအတွက်အိန္ဒိယလူမျိုးအဘို့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများကိုအစဉ်အမြဲရရှိနိုင်ပါနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ HR အဖွဲ့ကစီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်မည်နေကြသည်။
ကျနော်တို့သင်နှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်အချက်အလက်များသတင်းအချက်အလက်အားလုံးအပိုင်းပိုင်းနဲ့အတူတူယူဆနေကြသည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း စော်ဘွားအတွက်။ ဒီတော့တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, သငျသညျအိန်ဒိယနိုငျငံကနေဖြစ်ကြပြီးတစ်ထမ်းရှာဖွေသူကရောက်ရှိလုပ်ဖို့လွယ်ကူတဲ့အရာမဟုတ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာနေ။
အပြုသဘောဘက်တွင်, ကျွန်တော်တို့ဟာတစ်ဦးကိုစီမံခန့်ခွဲနေကြတယ်, သငျသညျကိုကူညီဒီမှာပါ WhatsApp ကိုအဖွဲ့များအလုပ်အကိုင်များရှာဖွေနေသူများအတွက်။ စုဆောင်းမှုမန်နေဂျာစနစ်, ဒူဘိုင်း option ကိုအလွန်ထူးခြားတဲ့အပ်လုဒ်ကိုကိုယ်ရေးရာဇဝင်နှင့်အတူ linkedin ကွန်နက်ရှင်။ စိတျထဲမှာဒီအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုမှအိန္ဒိယကနေအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေတာနဲ့အတူအများကြီးပိုလွယ်ဖြစ်သင့်သည်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်သရုပ်ဖော်ပုံအဖြစ်နှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေရေး, ငါတို့မှာရှိတယ် ဒူဘိုင်းအကြံဉာဏ်ကိုအတွက်လစာ, ratings, သင်အိန္ဒိယထဲကနေလျှင်ယူအေအီးအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့ဖို့ဘယ်လိုအကြံဉာဏ်အချို့ထည့်သွင်းရန်။
ဒါကြောင့်အခြားလမ်းထားရန်, ငါတို့အိန္ဒိယကနေတိုင်းကျွမ်းကျင်သူများနေရာတို့ကိုအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌ကောင်းသောန်ထမ်းဖြစ်လာစေရန်ကြိုးစားနေ။ ယေဘုယျအားဖြင့်အစဉ်အမြဲစကားပြောခြင်း ထွက်သည်ကိုရှာ MBA ဘွဲ့ရနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်များ နှင့်အမှု၌စာအုပ်သို့မဟုတ် Laptop ကိုသင်၌ရှာဖွေရေးကယ်တင်သင့်ရဲ့အနာဂတ်အလုပ်ရှင်မခေါ်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ် အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုအားဖြင့်သင်တို့ကို.
ကျနော်တို့အကောင်းဆုံးလူနေမှုပုံစံစတဲ့နှင့်အာရပ်အိပ်မက်၏ကျော်ကြားမှုအတွက်လမ်းလျှောက်သစ်ကိုအိန္ဒိယလူတစ်ဦးကိုတွေ့မြင်ရန်မျှော်လင့်ချက်ရှိခြင်းနေကြသည်။ ကျနော်တို့သာရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း သောသင်ဖြစ်လိမ့်မည်မျှော်လင့်ပါတယ်!။ မင်းကံကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးလျှောက်လွှာတင်လိုက်ပါ ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီ.